လမ်းဆုံ .....: MediaFire တွင် File Upload လုပ်ခြင်း
ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို အီးမေးကနေ ပို့တဲ့အခါ Gmail က ဖိုင်တစ်ခုကို 5MB ထက်ကျော်ပြီး ပို့ရင်အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိုင်တွေကို Upload လုပ်ပြီးမှ Gmail မှာ Attach တွဲပြီး ပို့ရပါတယ် ... နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် Webpage တွေမှာ Download ဖိုင်တွဲချင်တာ .. ဓါတ်ပုံတွေ တင်ချင်တာ .. စသဖြင့် .. လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ .. ဖိုင်တွေကို Upload လုပ်ရပါမယ် ..
File Upload အတွက်ကတော့ အသုံးများတဲ့ Website တွေနဲ့ Upload လုပ်ပုံကို ပြပေးပါ့မယ် ..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ .. Mediafire http://www.mediafire.com/ ကို ၀င်လိုက်ပါ. .
Upload to MediaFire ... ကိုနှိပ်ပါ ..
Upload Your Files .. ကို နှိပ်ပါ ။
ကွန်ပျူတာထဲက Upload လုပ်မယ့် ဖိုင်ကိုရွေးပါ ။ Open နှိပ်ပါ။
နောက်ထပ် ဖိုင်ရှိသေးရင် Add More Files ကိုနှိပ်ပါ ..
ပြီးရင်တော့ Begin Uploading Files .. ကို နှိပ်ပါ။
Upload Time ကို စောင့်ပေးပါ။
Upload Complete .. ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Go to My Files ကို နှိပ်ပါ။
မိမိ Upload လုပ်ထားသော ဖိုင်ကို တွေ့ရပါမယ်။
တခြားသူတစ်ယောက်ကို Download အတွက် ပို့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ . Share ကို နှိပ်ပါ။
Image page URL : ဆိုတာက ဒီဖိုင်ကို Download ချဖို့အတွက် လင့်ပါ
HTML Embed Code : ဆိုတာက ဒီဖိုင်ကို Webpage တစ်ခုမှာ တင်ဖို့အတွက်ပါ
ဒီကုဒ်ကို html code ထဲမှာ ထည့်လိုက်ရင်
<a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ym5mhnddtmg" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5b73bc581645db341cdeeaa7b24d292d2g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a>
Sharing URL with File Name : ဆိုတာက Download လင့်ပါပဲ..
သူက ဖိုင်နာမည်ပါ တွဲထည့်ပေးပါတာပါ။
http://www.mediafire.com/file/ym5mhnddtmg/Net Logo copy.gif